Nitaraina ny Organisasi momba ny fizahantany any Karaiba ny fahafatesan'i Sir Royston Hopkin
Home » Lahatsoratra farany farany » People » Nitaraina ny Organisasi momba ny fizahantany any Karaiba ny fahafatesan'i Sir Royston Hopkin
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Malahelo ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) tamin'ny fahafatesan'i Sir Royston Hopkin, tena goavambe amin'ny fizahan-tany any Karaiba.
Sir Royston dia mpanompo mahatoky sy be zotom-po an'ny Grenadian ary ny fizahan-tany any Karaiba nandritra ny enim-polo taonany ary ny fanolorany tena dia naseho tamin'ny alàlan'ny zava-bita miavaka maro. Izy dia vanim-potoana virtoaly nahavita be, nanolo-tena ho an'ny firenena sy Karaiba, ary fanoloran-tena ho mendrika amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny, porofon'izany fa ny Spice Island Resort any Grenada dia nitazona ny AAA Five Diamond isan-taona.
Vonona hatrany ny hizara torohevitra na fampaherezana tsara, Sir Royston dia mpanoro hevitra ny maro, tsy nitsahatra nandinika ny mpiasa sy tsara fanahy tamin'ireo vahininy. Mpino mafy orina ny haren'ny harena voajanahary sy ny kolontsaina Karaiba izy ary niasa tsy nisy fiasa ho an'ny faharetan'ny fizahan-tany any amin'ny faritra. Nandritra ny asany dia vonona foana izy hanolotra ny fotoanany, ny talentany ary ny fananany hanampiana ny hafa hanatratra ny nofinofin'izy ireo, manomboka amin'ny fialantsasatra tsy hay hadinoina ka hatramin'ny fanomezana asa ho an'ireo Grenadiana an-jatony sy ny fanatsarana ankapobeny ny faritra.
Ny fandalovan'i Sir Royston dia namela banga be tao amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny Karaiba, ary ny fahalala-tànany, ny fandraisam-bahiny, ny fahalalam-pomba, ny fanampiana ary ny fisakaizany dia tsy ho azontsika.
The CTO ny filankevitry ny minisitra sy ny komisiona misahana ny fizahan-tany, ny birao mpitantana, ny mpiasa ary ny fianakaviana CTO iray manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny vadiny, Lady Hopkin, ny fianakaviany, ny mpiasan'ny Spice Island Resort ary ny sehatry ny fizahan-tany Grenadian sy Karaiba izay niainan'izy ireo ny anjara birikiny manohy manana, fiantraikany tsara sy maharitra.